Chicken soup | Colourful Recipes
← Stawberry Milk Shake
water –2Qrt
carrot and green pea
ကြက်ရင်ဘုံ – ၈ တုံး
ဆား – လက်လက်ရည်ဇွန်း – ၃ ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၃ ဇွန်း
ရေ –2Qrt
ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း
ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့် – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း
မှို – ၂ ဗူး
ပြောင်းဖူး – ၁ ဗူး
မုန်လာဥနီ၊ ပဲစိမ်းလုံး – အနည်းငယ်
ချက်နည်း အညွှန်း ….
ခေါက်ဆွဲနှင့် စွပ်ပြုပ်ကို တွဲစားပီး cheese ဖြူးစားတာထက် ….
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲပုံစံလိုမျိုး … ချက်စားတာ ပိုစားကောင်းလိမ့်မယ်။ ….
ကြက်ရင်ဘုံ ၈ တုံးကို တ၀က်စီ တုံးထားပါ။
ဆား – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၃ ဇွန်း
အရင်ဆုံး … ကြက်သားကို ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နှင့် နှယ်ပီး Pressure cooker ထဲမှာ ရေဖြင့် တနာရီ အကြာ ( Medium Heat ) မီးမြေးမြေးဖြင့် ကြက်သား စွပ်ပြုပ် ချက်ထားလိုက်ပါ။
Pressure cooker – lock ကျဖို့ အတွက် … ကြက်သားစွပ်ပြုပ်အိုးအဖုံးပေါ်ကို ရေအေးဖြင့် ဘေစင်မှာ ဖွင့်ချလောင်းထားလိုက်ရင် Lock မြန်မြန်ကျပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Pressure cooker နဲ့ ချက်ရင် မီးပိတ်ပီး ၁၀ မိနစ် သာသာလောက်မှ Lock ကျပီး အဖုံး ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
တနာရီလောက် အကြာ ကြက်သား စွပ်ပြုပ် ချက်ထားတာမို့ စွပ်ပြုပ် အရည်ကို ကြည်နေတာပါပဲ။
( ၀က်နံရိုး စွပ်ပြုပ်တို့ ကြက်သား စွပ်ပြုပ်တို့က ကြာ ကြာ ချက်လေ စွပ်ပြုပ် အရည် ကြည်လေ ပါပဲ )
မှို စွပ်ပြုပ် အိုး ချက်ဖို့ အတွက် … ခရမ်းချဉ်သီး ၃ လုံးကို ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြေနေအောင် ကြိတ်ထားပါ။
( စွပ်ပြုပ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီး အရသာ ပါတာကို မကြိုက်တဲ့သူ ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို ထည့်မချက်ပါနှင့် … ကိုယ့်ကတော့ ကျန်းမာရေး အရကော … တခြား အကျိုးကျေးဇူး … ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်သား စွပ်ပြုပ်က အသားရည် လှ ပါတယ်။…. ခရမ်းချဉ်သီး အနံပျောက်ဖို့ အဖုံးဖွင့် … ခရမ်းချဉ်သီးဖတ်တွေ ကြေပီး ကျက်နေအောင် ချက်ရင် ရပါတယ်။ ပီးရင် နံနံပင် နှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နိုင်နိုင်ဖြူးပီး ချက်လိုက်ရင် စွပ်ပြုပ်မှာ ခရမ်းချဉ်သီး ပါတာ … မသိသာတော့ပါဘူး )
ချက်မယ့် အိုးထဲမှာ အရင်ဆုံး
ဆီ – ထမင်းစားဇွန်း – ၁ ဇွန်း ကို မီးမြေးမြေး အနေအထားနှင့် အပူပေးပီးပါ။
ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့် – လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း ဖြင့် ငရုတ်သီး ဆီချက်လိုက်ပါ။
ငရုတ်သီး ဆီချက်သတ်ပီးတာနဲ့ ….
ကြိတ်ထားသော ခရမ်းချဉ်သီး ၃ လုံး အနှစ် များထည့် … ဇွန်းဖြင့် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပါ။
ရေ – 1/2 cup ထည့်ပီး ခရမ်းချဉ်သီးဖတ်များ နွမ်းတဲ့ အထိ ( High Heat ) မီးအားများများဖြင့် မွှေပါ။
ပါးပါး ရိပ်ရိပ် လှီးဖြတ်ထားသော နံနံပင် အနည်းငယ် ထည့်ပါ။
** ( ခရမ်းချဉ်သီး မကြိုက်ရင် မထည့်ပါနှင့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး မထည့်ရင် နံနံပင် မထည့်ပါနှင့် ) **
သံဗူးဖြင့် လာသော မှို – ၂ ဗူး ဖောက်ထည့်ပါ။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – ၃ ဇွန်း ထည့်ပီး … အဆက်မပြတ် မွှေပေးပါ။
( ဆားထည့်စရာ မလိုပါ။ သံဗူးနဲ့ လာတဲ့ မှို ဗူးက အရသာ ပါပီးသားမို့လို့ပါ )
စွပ်ပြုပ်အိုး ပွက်ပွက်ဆူလာရင် …
ပဲစိမ်းလုံး၊ ပြောင်းဖူး၊ မုန်လာဥနီ ထည့်ပါ။
ကြက်သား စွပ်ပြုပ်အိုးထဲမှ ကြက်သားစွပ်ပြုပ် အရည် သပ်သပ်ကိုပဲ ထည့်ပီး အဆက်မပြတ်မွှေပါ။
လိုအပ်ရင် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – ၁ ဇွန်း ထည့်ပါ။
By Thet Nandar • Posted in Chicken - Soup, Chicken Recipe	• Tagged မှို ပြောင်းဖူး မုန်လာဥနီ ကြက်သားစွပ်ပြုပ်, ကြက်သားစွပ်ပြုပ်, Chicken Soup, colourful recipes blog, cream of mushroom soup, dinner, food, pepper powder, tbsp chili powder
2 comments on “Chicken soup”
September 24, 2012 @ 10:34 pm
Now, I’m so hungry. It’s Autumn in California and the weather is perfect for your soup. This soup makes my mouth water and tummy growl.
Gummy Candy Chu
This looks so delicious. I love chicken soup with mushroom. I gotta try this soon.